बुहारी बोझ होइन भन्ने सिकाउन विश्वविद्यालय खोलौं |
बुहारी बोझ होइन भन्ने सिकाउन विश्वविद्यालय खोलौं
प्रकाशित मिति :2019-07-09 11:41:04
विवाहको मौसम छ । विवाह, भोज र भतेरका लागि मान्छे जति उत्साही छ, बुहारी शब्द छोरी दिएको घरप्रति त्यति नै निरुत्साहित मात्र होइन नकरात्मक नै छ । परम्परादेखि नै सासू र बुहारीको सम्बन्धलाई लिएर समाजले एउटा भय सिर्जना गरिदिएको छ ।
खुब मातेकी छस, सासू कस्ती पर्ने हो ? छोरो त सद्दे थियो, बुहारी कस्ती पर्ने हो ? यसरी चिन्दै नचिनेका सम्बन्धहरुमाथि शंका र भय समाजले नै पैदा गरिदिन्छ । अनि शुरु हुन्छ कसले कसलाई आफ्नो बसमा पार्ने भन्ने अघोषित प्रतिशपर्धा ।
यता लाडप्यारले हुर्काएकी कमलको फूलजस्ती छोरीलाई चोट पुर्‍याउने हुन् कि भनेर छोरीका बाबुआमाको निन्द्रा गायव हुन्छ, उता विवाह गरेपछि छोरो खोसिने हो कि भन्ने चिन्ता ।
बुहारीलाई टाउकामा टेकाउने होइन नि भन्दै समाज घरपट्टकिालाई खबरदारी गरिरहन्छ । सासू संस्था गोलकिपर जसरी प्रतिरक्षाका लागि सधैं तयार भएर बस्छ । भरखर लाडिएर मात्तिएर पाली पोसिएकी छोरी जब बुहारी बन्छे, एकैदिनमा उसको जीवनमा आएका तमाम परिर्वतनलाई आत्मसाथ गर्न नै हम्मेहम्मे पर्छ । त्यसमाथि परिवारले बुहारीबाट खोजेको निपुर्णताको परीक्षा उसले एकै पटक पास गर्नु पर्छ । नयाँ घर, नयाँ परिवेश र नयाँ सम्बन्धहरुलाई आत्मसाथ गर्ने अवसरै नदिई उसको मूल्यांकन शुरु हुन्छ । घर परिवार मात्र होइन, उसको परीक्षक बनेर बसेका हुन्छन् नन्द, आमाजू, ठूलीआमा सानीआमा, तिनका स्वामीनाथहरु, छरछिमेक र परिवारसँग जोडिएका ईस्टमित्रहरु ।
यस्ता यावत सकसबाट मुक्त हुन बुहारीले हरदम अवसरको खोजी गरिरहन्छे । हातमा सीप र ज्ञान बुद्धिले परिपूर्ण भएकी छोरी झिनामसिना कुराले सिर्जना गर्ने ठूलाठूला मानसिक तनाव सहेर कसरी बस्छे होला रु आमाहरुले कहर काटेझैं यी टिक्दैनन् । न त अब आमाबाबुले नै सिकाउँछन् छोरी तैंले सहनुपर्छ भनेर ।
राम्रो पढ्नू, आफ्ना खुट्टामा आफैं उभिनुपर्छ । अरुसित आश्रति भयो भने त हेप्छन् । यसैले पढ छोरी पढ भन्दै बाबुआमा छोरीका लुला गोडामा त्रासैत्रासको पुलिन्दा बिच्छ्याएर दह्रोसँग टेक्न सक्ने बनाउँछन् । नयाँ जीवनको कल्पना उसले आफ्नै तरिकाले गरेकी हुन्छे । सपनाको राजकुमारसँग वायुपंखी घोडामा चढेर ऊ संसार चाहार्छे । तर, आफ्नो केही पनि लगानी नभएको चिजमाथि घरपरिवार हैकम जमाउन खोज्छ । तराईतिर दाइजोको रुपमा र पहाडतिर मान सम्मानको रुपमा छोरालाई लगानी गरेको सम्पूर्ण सावा मात्र होइन ब्याजसहित बुहारीबाट असुल उपर गर्न खोज्छन् ।
एउटै कक्षामा पढ्दै गरेका र एउटै कार्यक्षेत्र भएका केटाकेटीका प्रेम र विवाह धेरै हुन थालेका छन् । समान हैसियत भएका केटाकेटी जब वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्छन्, तब उनीहरुको हैसियत कसरी आकाशजस्तो अग्लो र पातालजस्तो गहिरो हुन्छ रु विवाह एउटा संस्था हो जसले परिवार र समाजको निर्माण गर्छ । जब हामी समान वर्गमा विभेद गर्छौं अनि कसरी मिल्यो सिकाइ र खोजाइ ?
हामी छोरीहरुलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन मात्रै प्रेरित गरिरहेका छैनौं, कसैसँग पनि झुक्न हुँदैन भनेर सिकाइरहेका छौं । एकथरि बाबुआमा झुक्नै नहुने शिक्षा दिइरहेका छौं भने अर्काथरि बाबुआमा बुहारी लम्पसार परोस् भन्ने चाहन्छौं । अनि छोरालाई चैं केही सिकाउनुपर्दैन र भन्या ?
हामीले बिर्सिरहेका छौं कि तपाईंको घरमा भित्रिन आउने बुहारी छुट्टै ग्रहबाट आउने त होइन, ऊ पनि यही समाजकी छोरी हो । समाज कता र कसरी गइरहेछ भन्ने हेर्दै नहेरी बुहारीमाथि अनेक नियमहरु थोपार्छौं । अनि कसरी मिल्छ तपाईं र उसको सोच ?
श्रद्धाले आदर गरिनुपर्ने तपाईं मान खोजेर आफै आफ्नो उचाइ घटाइरहेको कसरी नदेख्नु भएको होला रु अफिसबाट घर आएको छोरोलाई थकित देख्ने परिवार बुहारी आएर खाजापानी गर्छे भनेर कुरिरहन्छ । हैन, बुहारीलाई पनि थकाइ लाग्छ भनेर हामी किन सोच्दैनौं होला ?
मनमा प्रश्न उब्जिरहन्छ । जवाफ दिने कसले ? किंकर्तव्यविमूढ समाजलाई कसले झक्झक्याउने ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न नसक्दा एकथरी छोरीहरु समाजबाट धेरै बाहिर पुगिसके जो छन्, तिनका विषयमा सोच्न अझै ढिलाइ गर्नु कदापी हुँदैन ।
बुहारीलाई पनि आफ्नै छोरीजस्तो माया गर्यो भने पो बुहारीले पनि माया गर्छे भन्ने चेतना कसले भर्ने ? जन्मदातालाई जस्तै माया गरे त उनीहरुले पनि माया गरिहाल्छन् भनेर छोरीलाई सिकाउने जिम्मा कसले लिने ?
आफ्नो छोराले गरेका कुनै पनि गल्ती र कमी कमजोरीलाई नजरअञ्दाज गर्दै आफ्नो सबैथोक छोडेर तपाईको घर सजाउन आएकी बुहारीलाई दोषमात्रै थोपरेर कसरी घर हराबरा बन्छ रु तपाईंले लगाएका तमाम दोषको भारी बोकेर थिचिएकी उसले भोलि तपाई अशक्त हुँदा कसरी रेखदेख गर्न सक्ली त रु तमाम प्रश्नहरुको उत्तर कसले दिन्छ ?
समय यसै पनि परिवर्तनशील छ । पहिला-पहिला २० वर्ष लाग्ने जेनेरेशन ग्याप प्रविधिको विकाशसँगै ५ वर्षमा झरेको छ । समाजले जबसम्म यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई स्थान दिँदै जान्छ, परिवार त झन एकल बन्दै जानेमा दुई मत छैन ।
हाम्रा हजुरआमा जसरी अहिलेका बुहारीको दायित्व घरपरिवारमा मात्र नभइ कार्यालयमा पनि हुन्छ । हाकिम हुन्छ, प्रतिस्पर्धी, समकक्षी साथीहरु हुन्छन् । कामको चाप कार्यालयबाट घरसम्म आउन सक्छ । अफिसमा बुझाउनुपर्ने कागज पत्र हुन्छन् । ठूला-ठूला सम्झौताहरु गर्न प्रेजेन्टेसन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । ऊ हतारमा हुन सक्छे । हतास हुन सक्छे । तर, तपाई उसले निधारमा टीका लगाई कि लगाइन, हातमा चुरा लगाई कि लगाइन । मलाई ढोगी कि ढोगिन १ चिया सोध्छेकी सोध्दिनँ जस्ता झिना मसिना कुराहरु सोचिरहनुहुन्छ ।
हाम्रो देशमा ६ र ७ वटा विश्वविद्यालयहरु छन् । विभिन्न संकायमा पढाइ हुन्छ । आर्टस, कमर्श, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, नर्सिङ कृषि र इञ्जिनियरिङझैं कि त परिवार विश्वविद्यालय खोलिन पर्‍यो । कि त सासू-बुहारी संकाय खोलिनपर्‍यो । वा खोलिनुपर्‍यो तालिमकेन्द्रहरु, कसरी परिवारमा समन्वय गर्ने ? नयाँ आउने मान्छेसँग घरपरिवार नातागोताले गर्ने व्यवहार, कर्तब्य र दायित्वका विषयमा अध्ययन र छलफल होस् । जसरी आवश्यकतासँगै थपिए पत्रकारिता, समाजशास्त्र र फार्मेसीका कोर्षहरु, त्यसैगरी थपिउन् परिवारका मूल्य र मान्यतालाई जोगाइराख्ने विषयवस्तु । यो विवाह वा बुहारी पुस्ता हस्तान्तरण हो, बोझ होइन भनेर सिकाइयोस् ।
छोरीहरु तिमीले धेरै पढेका छौ। आफ्नो खुट्टामा उभिएका छौ । यसको मतलव यो पनि त पक्कै होइन तिमीहरु सबैभन्दा माथि छौ । धेरैमाथि, आफ्नै अग्रजभन्दा पनि । तिमीहरुसँग साधन स्रोत छ । अवसर छ । चुनौती छ । तिमीहरु तिम्रा आमा, हजुरआमा जसरी भात भान्सामा अटाउँदैनौं यसको मतलव तिमीहरुलाई खानै नपर्ने हो र ? फलेको हाँगा सधैं झुक्छ । तिमीहरु झुक्दा तिम्रै मान बढ्छ । तिमीहरुले नै परिवारको माया पाउँछौ । तिमीहरुसँग मनोरञ्जनका अनगिन्ती साधन छन् । क्लब, आउटिङ, फिल्म आदि आदि । अभिताभ बच्चन र हेमा मालिनी अभिनित वागवान फिल्म हेर त तिम्रा बाबुआमा तिमीबाट के चाहन्छन् ? आजको पुस्ता कस्तो छ ?
होइन भने बुहारी तपाईंको छोराभन्दा कैयौं गुण सवल पनि हुन सक्छे । तपाईंलाई झेल्नुभन्दा ऊ एक्लै बस्न रुचाउली । विदेशमा दुःख छ । असाध्यै दुःख छ, तर पनि स्वतन्त्रताका लागि ऊ हुरुरु भएर विदेशिन्छे कहिल्यै नर्फकने अठोटसहित ।
हजुरबा हजुरआमाका काखमा नाति नातिना खेल्न र खेलाउने हाम्रो सुन्दर पारिवारिक संरचनालाई जोगाई राख्ने हो भने छोराछोरीलाई जसरी एउटै शिक्षा दिइरहेका छौं, उसैगरी पारिवारिक दायित्व पनि तिमीहरुको बराबर छ भनेर सिकाउन अब ढिलो भैसकेको छ ।
ज्वाइँले घरमा काम सघाउँदा खुशी हुने तपाईं छोराले सघाउँदा जोइठिंग्रे कसरी देख्नुहुन्छ ? एउटै कोखबाट जन्मेका छोराछोरीमा छोरा ससुराली जाँदा मानमाथि मान र छोरी ससुराली जाँदा झुक्तमान । अब हाम्रा आँखाको पावर परिवर्तन गर्ने हो कि ? अनलाइनखबरबाट